'सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन' | Citizen Post News
यसै सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग राससका समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीविरुद्धको यो घेराबन्दी अहिले एकाएक आएको होइन । मूलतः यो घेराबन्दीको क्रम वर्तमान सरकारको दुई वर्ष पुगेको समय (२०७६ फागुन ३) देखि यो वा त्यो रुपमा आरम्भ भएको देखिन्छ । त्यसपछि निरन्तर सरकारविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट विरोधको शृङ्खला मुखरित भएको हो ।
हिसाब नै गरिएको भए गत सङ्घीय निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले पाएको ३३ लाख र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पाएको ११ लाख हाराहारीको मतलाई आधार मान्ने हो भने ७५र२५ प्रतिशत हिस्साका आधारमा एकता गरिन्थ्यो होला तर त्यसो नगरी ६०-४० प्रतिशतको हाराहारीमा कमिटी बनाइए ।
विसं २०७५ जेठ ३ मा एकता घोषणा हुँदा दुई वर्षभित्र गरिने महाधिवेशनमा पनि सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको थियो । हामीले तोकिएका समयमा एकताका काम पूरा गर्न सकेनौँ र कोभिड-१९ लगायत कारण दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएको महाधिवेशन आगामी चैत मसान्तमा गर्ने गरी गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्धारण गरेको छ । सोही बैठकले पार्टीभित्रका विवाद समाधान गरेर भदौ २९ मा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको हो ।
अहिले पुनःविवाद देखिनुमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट केही कमजोरी छैनन् त ? जस्तो मन्त्रिमण्डलको हेरफेर, राजदूत र विभिन्न नियुक्ति, भारतीय विशेष प्रतिनिधिसँगको भेटवार्ता आदिबारे किन यत्रो विवाद ?
त्यतिबेला तीनै जना मन्त्री नियुक्तिका लागि तयारी भएर राष्ट्रपतिसमक्ष नाम गइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको हो । अन्य मन्त्रीका हकमा दशैँतिहारपछि विचार गर्न प्रधामन्त्री तयार हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा पटकपटक निर्वाचन जितेर मन्त्री नभएकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो । यो छलफलकै क्रममा छ । राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि परामर्श भएको हो भनेर प्रधानमन्त्री भनेका कुरा बाहिर पनि आइसकेको छ । डा युवराज अतिवडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतमा अध्यक्ष दाहालकै प्रस्ताव हो ।
निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत बनाउने पनि सहमति र जानकारीमै भएकै हो । प्रधानमन्त्रीले परामर्श भएको हो भनिसकेपछि यति कुरामा उहाँले ढाँट्नुभयो होला भनेर कसरी भन्ने रु मन्त्रिपरिषद्मा अर्को एक जना पनि राजदूतका लागि सिफारिश आउँदा प्रधानमन्त्रीले यसमा परामर्श हुन बाँकी छ भन्नुभएको पनि मन्त्रीहरुबाटै आएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी वा एक्लै गर्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसमा मेरो भनाइ के छ भने हामीले आफ्नो शक्ति र हैसियतमा विश्वास नगर्दा यस्ता टिप्पणी आएका हुन् । विदेशी हस्तक्षेप केका लागि आवश्यक छ र ? अध्यक्ष पार्टीले चयन गर्ने हो, प्रधानमन्त्री संसद्ले बनाउने हो । विगतमा भारतले यहाँको ‘माइक्रो म्यानेजमन्ट’ गरेको भनिन्थ्यो “अब नगर” भनेका होइनन् र नेताहरुले ? कुनै मुलुकले त्यस्तो हस्तक्षेप सोचेको छ भने छाड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध कसको इशारामा को-को लागेको भनेर बोल्नुभयो । समयक्रमले बताउला पनि भन्नुभयो तर हामी हाम्रो व्यवस्थापन गर्न आफैँ सक्षम छौँ भन्ने विश्वास सबैमा हुनुपर्छ ।